संसार रुवाउँने नेपालको यो तस्विर : आमा को हुन ? «
संसार रुवाउँने नेपालको यो तस्विर : आमा को हुन ?
प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार १०:१५
काठमाडौं । आमा आफैंमा एक सम्मानको शब्द हो । संसारको सबैभन्दा महान सम्बन्ध नै आमा हो । आमाको महिमा कत्तिसम्म अपार हुन्छ यसको सायद हरेक सन्तानलाई थाहा हुन्छ ।
आमा वा माता को हुन ?
आमा वा माता कुनै बच्चालाई जन्म दिने र पालनपोषण गर्ने अथवा शुकाणुसँग मिलेर बच्चाको विकासको लागि अण्ड प्रदान गर्ने महिलालाई भनिन्छ। आमाको बच्चालाई जन्म दिनु मात्र कर्तव्य र दायित्व होइन। उसलाई असल बानी व्यवहरा प्रर्दान गरि समाजका लागि योग्दान दिन सक्ने बनाउनु पनि आमाकै जिम्मेवारी भित्र पर्छ। यसलाई निभाउन कुनै आमा पनि चुक्नु हुदैन।
सर्वगुणी आमा कर्तव्यकी मुहान मात्र होईनन्, कल्याणकी देवी पनि हुन् । भनिन्छ, आमाको आँशु जीवनकै ठूलो पाप ठानिन्छ । यति भनिसकेपछि आमा को हुन् चिन्न गाह्रो छ र ?तर अचेल आमा आफ्नै श्रीमान् र सन्तानवाट हेलामा पर्न थालीएको छ । तिमिलाई जन्मायो, हुर्कायो, जिम्मेवार बनायो तर बुढेशकालमा आमा बेसाहारा बन्दै बलिन्द्रधारा आँशु झार्न बाध्य बनेकी छिन् ।